यसकारणले भन्न सकिन्छ, सर्वोच्चको आदेश त्रुटीपूर्ण छ – Sahara Times
प्रतिनिधिसभा अहिले छैन, विघटित छ । विघटन विवादित भए पनि प्रतिनिधिसभाबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन अर्थात् पुनर्स्थापित भएको छैन । सत्य के हो भने, संघीय संसदको कुनै अधिवेशन चालू छैन ।
त्यस्तोमा आवश्यक व्यवस्थापकीय व्यवस्थापनको लागि अध्यादेश नै एउटा उपाय रहेको स्पष्टै देखिन्छ । अदालतले आफ्नो आदेशको बूँदा ३ र ४ मा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने व्यवस्था आगाडि सारेको छ ।
के संविधान बमोजिम नागरिक हुनेले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएकै कारण राज्यविहिनताको अवस्था भोग्नु परिरहेको स्थितिको समाधान तत्काल आवश्यक छैन ? तिनको अधिकारको सुरक्षातिर अदालत लगायत सबैको ध्यान जरुरी छैन ? तिनले दैनिक जीवन, पेशा-व्यापार, शिक्षा, लगायतका क्षेत्रमा भोग्नु परेको त्रासदी र मानसिक प्रतारणाबाट मुक्तिको निमित्त तत्काल केही गर्न आवश्यक छैन ?!
२. सर्वोच्च अदालतको यस आदेशमा Dr. DV Wadhva VS. State of Bihar को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई उल्लेख गरिएको छ । यो मुद्दाको विषय र नागरिकता अध्यादेशको विषय फरक-फरक हो । उक्त मुद्दा फेरि-फेरि दोह्राई-तेह्राई निरन्तर रुपमा एउटै अध्यादेश जारी गर्न नहुनेसंग सम्बन्धित थियो । त्यतिखेर १९६७-१९८० सम्म बिहारमा २५६ अध्यादेश यसरी आइरहेका थिए र कतिपय ९ वर्ष देखि १४ वर्षसम्मदेखि निरन्तर लागू थिए । अदालतले सो अभ्यासलाई रोकेको हो । नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश त्यस्तो होइन । त्यसकारण, सर्वोच्चले लिएको सन्दर्भ त्रुटिपूर्ण छ ।
३. सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा नागरिकताको वितरण भइ नै रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । तर, यस सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने विषय के छ भने संविधानको धारा ११ को १ देखि १४ सम्म नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ । के सबै प्रावधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरित भइरहेको छ ? छैन भने, जुन-जुन प्रावधान अनुसार भइरहेको छैन त्यसबाट प्रभावित नागरिक राज्यविहिन नै रहने ?! अर्को कुरा, अध्यादेशको कुन चाहिं दफा, उपदफा गैर नागरिकलाई नागरिकता दिने भनेको छ ? यदि भनेको छ भने उल्लेख गरी त्यसलाई तत्काल बदर गर्ने आदेश आउनु पर्थ्यो !
अन्तमा, सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान र पालना हरेक नागरिकको कर्तव्य हो र नागरिकको अधिकारको सुरक्षा अदालतको न्यायसम्पादनको प्राथमिक कर्तव्य । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश एउटा उपलब्धि हो । राज्य र सरकारले अन्ततः जनताको न्यायोचित मांग स्वीकारेको अवस्था हो यो । यो कुनै एउटा क्षेत्रसंग मात्र सम्बन्धित छैन । यो राष्ट्रिय समस्या हो । अदालतको यस त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश Vacate गर्न सरकारले अदालती कारवाही तुरन्त शुरु गर्नु पर्दछ । सरकारमा शामिल राजनीतिक दलहरू र जनपक्षीय समस्या समाधान गर्न चाहने दल तथा नागरिक समाज यसबारे शिघ्रातिशिघ्र आगाडि आउनु पर्दछ ।
Tags: #brikheshchandra, #JSPNEPAL, #nagarikta
एउटा यस्तो सरहदतः जहाँ एक अर्काको भरमा बाँचछन् दुवै देशका नागरिक
प्रभु साहले भन्नुभयो, अध्यादेशलाई रोक लगाउने न्यायधिशलाई महाअभियोग लगगाउनुपर्छ